China ST12 CRC inotonhora yakakungurutswa simbi strip fekitori uye vagadziri |Zhanzhi
inotonhora yakakungurutswa yesimbi tambo inogadzirwa kubva kune inopisa yakakungurutswa coils pakamuri tembiricha uye pazasi recrystallization tembiricha, kusanganisira mashizha nemakoiri, ayo anogona kugadzirwa neakawanda epamba simbi zvigayo seBaosteel, Wuhan Iron uye Steel Co., Ltd. Pakati pavo, kutakura mumashiti inonzi simbi yesimbi, inonziwo bhokisi rebhokisi kana kuti flat sheet;Hurefu hwakareba, hunounzwa mumakoiri, hunonzi simbi yesimbi, inonziwo coiled sheet.Ukobvu hwetambo inotonhorera yakamonerwa kazhinji 0.1 ~ 3.0 mm uye hupamhi i100 ~ 1250 mm;Inoshandisa inopisa yakakungurutswa tambo kana simbi simbi semidziyo yakagadziridzwa uye inokungurutswa kuita zvigadzirwa neinotonhora inotenderedza chigayo pane yakajairika tembiricha.
Cold rolled steel strip ine zvinhu zvakanaka, kureva, kuburikidza nechando inokunguruka, inotonhora yakakungurutswa simbi tambo ine mutete mukobvu uye yakakwira chaiyo inogona kuwanikwa, ine kupfava kwepamusoro, kupedzwa kwepamusoro, kwakachena uye kwakapenya pamusoro pesimbi inotonhora-yakakungurutswa, kupfekedzwa kuri nyore. kugadzirisa, marudzi mazhinji uye mashandisirwo akafara, uye panguva imwe chete, ine hunhu hwepamusoro stamping performance, hapana kuchembera uye yakaderera goho poindi.
2.Grade: ST12, nezvimwewo.
(1) kana simbi yemutsetse yakakungurutswa munzvimbo inotonhora, nekuda kwekushanda kwekuoma kwesimbi yetambo, inofanirwa kupfaviswa zvakare nekunyungudika kwepakati, uye purasitiki yayo inofanira kudzoserwa kuti irambe ichikunguruka;
(2) Asati akungurutswa, chiyero chepamusoro chesimbi simbi chinofanirwa kubviswa, nekudaro kuve nechokwadi chekutsvedzerera kwepamusoro kwesimbi yemucheka uye kuderedza kupera kwemaromburu;
(3) Tension rolling inotambirwa, iyo inova nechokwadi chechimiro chakanaka chetambo yesimbi, inodzora kutsauswa ukobvu kwesimbi yemutsetse, inoderedza kutenderera, uye inobatsira pakukungurutsa zvigadzirwa zvakatetepa geji.
(4) Maitiro ekutonhora uye mafuta anogamuchirwa, ayo ari nyore kudzora tembiricha yemupumburu uye simbi yekubvisa, kuderedza kupokana pakati pemupumburu uye simbi yekubvisa uye kuderedza kutenderera kumanikidza, izvo zvinobatsira kune chimiro kutonga uye kudzivirira tambo. simbi kubva pakunamatira kumupumburu.
Cold rolled steel strip inoshandiswa zvakanyanya mukucheka-kumucheto tekinoroji minda, senge mota, chiridzwa, redhiyo, kudzivirira kwenyika uye indasitiri yezvemuchadenga, nezvimwe.